ओली – नेपालबीचको चर्काचर्कीपछि प्रचण्डले गरे यस्तो कडा टिप्पणी, नेता कार्यकर्ता चकित — Sanchar Kendra
ओली – नेपालबीचको चर्काचर्कीपछि प्रचण्डले गरे यस्तो कडा टिप्पणी, नेता कार्यकर्ता चकित
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरुले अनुशासन तोडेको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रचण्डले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । पार्टीभित्र जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही बोल्न थालिएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले पार्टी अनुशासनको विषय उठाएका हुन् ।उनले भने, ‘हामी हिजो निकै अनुशासित थियौं र मात्र यहाँ आइपुगेका हौं । आजभोलि अनुशासनबाट गिरेर जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही बोलिदिने, समूहको हितलाई बेवास्ता गर्ने भयौं ।’ ‘सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ उल्टिएर अहिले व्यक्तिगत निर्णय, जिम्मेवारी समूहले लिइदिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताए । प्रचण्डले यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जानुपूर्व बालुवाटारमा पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा केपी ओली र माधव कुमार नेपालबीच भनाभन भएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा ओलीले तपाईको शुभकामना चाहिँदैन भनेपछि दुई नेतावीच भनाभन भएको थियो ।
प्रचण्डले नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुगेपछि राजा महाराजाको जस्तो लक्षण देखिन थालेको बताए । यसले पूर्वी युरोपमा जस्तो राजा महाराजाविरुद्ध लडेका जनतालेे नै लखेट्ने जस्तो अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । सोभियत संघ लगायतमा कम्युनिस्ट सत्ता ढल्नुको कारण कोट्याउँदै उनले बुर्जवाहरुले कम्युजिस्टहरुसँग लड्न नसक्ने तर सत्तामा गएपछि विकृत बनाउने र एउटा गोली पनि नचलाई उल्टाइदिने क्षमता राख्ने सुनाए । उनले अघि भने, ‘पूर्व युरोपमा विदेशी हस्तक्षेप भएर वा कसैले सशस्त्र संघर्ष गरेर सत्ता उल्टिएको होइन । कम्युनिस्ट नेताहरु नै राजा महाराजा जस्तै हुँदै गएपछि जनताले लखेटेका हुन् ।’
उनले अघि भने, ‘हामी कहाँ पनि यसो हेर्दा लक्षण चाहिँ कताकता त्यस्तै देखिएको छ ।’ यद्यपि त्यस्तो परिघटना दोहोरिन नदिने र निरन्तर जनतामा जाने बैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृति उपाय के हुन्छन् भनेर आफूहरु बहसमा रहेको उनले बताए ।
कसरी भयो ओली-नेपाल झगडा ?
गत शुक्रबार र आइतबारको बैठकका निर्णयलाई लिएर नेता नेपालले सातबुँदे लिखित असहमति राखेका थिए । बिहीबारको बैठकमा त्यही लिखित असहमति र त्यसपछि नेताहरूबीच उत्पन्न तरंगले प्रवेश पायो । नेता नेपालले आफूमाथि लाञ्छित गर्दै फेसबुकमा लेख्ने सांसद तथा हालै प्रेस संगठनको इन्चार्ज घोषणा गरिएका नेता राजेन्द्र गौतमको प्रसंग झिके ।
उनले ‘जे पायो त्यही लेखेको’ भन्दै गौतमलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यो कुरा ओलीलाई चित्त बुझेन । ओलीले नेपाललाई ‘तपाईंले पनि बुधबार पत्रिकालाई प्रयोग गरेर के–के लेखाउनुभएछ’ भन्दै सातबुँदे असहमतिपत्रमा आपत्ति जनाए । ‘तपाईँचाहि जे पायो त्यही कुरा पत्रिकामा छपाउँदै हिँड्न मिल्ने, अनि अरूले चाहिँ केही लेखे भनेर कारबाही गर्नुपर्ने ?’ भन्दै उल्टै नेपालमाथि ओली खनिए । त्यसपछि माहौल तात्दै गयो ।
अध्यक्ष ओलीले आफू सिंगापुर जान लागेको र आफ्नो अनुपस्थितिमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक गर्न सक्ने भन्दै जिम्मेवारी दिए । ‘पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि अध्यक्षले बैठक गर्नुहुन्छ तर निर्णय गर्दा मेरो पनि सहमति लिनुहोस्,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘उताबाट टेलिफोनमै कुराकानी गर्न सकिन्छ ।’
ओलीले यहाँ बैठक बसे पनि आफ्नो सहमतिबिना निर्णय नगर्न भनेपछि नेता नेपाललाई झोंक चल्यो । उनले कड्किदै भने, ‘मेरो विमति हुँदा निर्णय हुन्छ भने तपाईंको विमतिमा चाहिँ किन हुँदैन ? यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, सामूहिक निर्णयमा चल्छ, तपाईं जति नै भोट मैले पनि ल्याएको छु । तपाईँचाहिँ सुपरम्यान हो र ? तपाईं फस्ट एमङ द इक्वल (बराबरीमध्येको पहिलो) त हो नि । मैले पनि पार्टीको नेतृत्व गरेको छु ।’ पार्टी एकतापछि नेता नेपालले अहिलेसम्म दुइटा लिखित असहमतिपत्र पार्टीमा दर्ता गराइसकेका छन् । त्यसैले आफ्नो असहमतिका बीच निर्णय भएकोमा उनको व्यापक असन्तुष्टि छ ।
नेपालले ‘अध्यक्ष छुट्टै नहुने र अनुपस्थितिमापनि निर्णय हुन सक्ने’ खालको कुरा गरेकोमा ओलीलाई थप चित्त बुझेन । ओलीले ‘पार्टीको अध्यक्ष म कि तपाईँ ?’ भन्दै नेपालप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । त्यसपछि नेपालले ‘म पनि पार्टीको प्रमुख भएर काम गरेको हुँ, सामूहिक निर्णयमा चल्नुपर्छ’ भन्दै जवाफ फर्काए ।
ओली र नेपालबीच चर्काचर्की बढेपछि अन्य नेताहरूलाई पनि असहज भयो । महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष उपचारका लागि जान लागेको भन्दै बैठकबाट स्वास्थ्य लाभको कामनासहितको प्रस्ताव पास गर्ने विषय प्रवेश गराए । स्वास्थ्यको विषयमा पनि ओली र नेपालबीच सवालजवाफ चर्कियो । नेपालले ओलीलाई ‘ल स्वास्थ्य लाभको कामना छ’ भने । ओलीले ‘स्वास्थ्य बिग्रियोस् भनेर हिँड्नेको स्वास्थ्य लाभको कामना चाहिएन’ भन्दै अस्वीकार गरे ।
ओलीले स्वास्थ्य बिग्रियोस् भन्दै हिँडेको आशयको आरोप लगाएपछि नेता नेपाल झनै जंगिए । ‘मैले कहाँ भनेको छु प्रमाण देखाउनुहोस्, छानबिन कमिटी बनाउनुहोस् । तपाईं यतिसम्म भन्ने ? म तपाई जस्तो छुद्र कुरा गर्ने मान्छे होइन,’ उनले जवाफ फर्काए । ‘मानवीय संवेदनशीलताको विषयमा मैले कतै टिप्पणी गरेको रहेछ भने त्यसलाई पुष्टि गर्नुहोस्’ भन्दै नेपाल चर्किए ।
त्यसपछि सचिवालयमा थप छलफलको माहौल बनेन । ओलीले नेपाललाई लाञ्छित गर्ने र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्दैन भनेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ‘त्यस्तो नभनेको भए हुने’ भन्दै ओलीलाई सम्झाए । ‘स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा लिन्न भन्न हुँदैन’ भन्दै अन्य नेताहरूले ओलीलाई आग्रह गरे पनि दुई नेताबीच पुनः सौहार्द छलफल हुने वातावरण बनेन । त्यसपछि सचिवालयको बैठक समापन भयो ।